I-visa yaseVietnam eyabantu baseNingizimu Afrika | Vietnamimmigration.com official website | e-visa & Visa On Arrival for Vietnam | Lowest Price Guarantee, From US$6
I-visa yaseVietnam eyabantu baseNingizimu Afrika
› Indlela yokuthola i-visa yaseVietnam
Izakhamuzi zaseNingizimu Afrika zidinga i-visa ukuze zingene eVietnam.
Indlela yokuthola i-visa yokuvakashela iVietnam eyabantu baseNingizimu Afrika?
Okwamanje, kunezinketho ezintathu (3) zokuthola i-visa yokuvakasha yaseVietnam eyabantu baseNingizimu Afrika. Izakhamuzi zaseNingizimu Afrika noma izakhamuzi zamanye amazwe eziseNingizimu Afrika zingalandela imiyalo ngezansi ukuze zithole i-visa yokuvakashela iVietnam.
Inketho 1: Bhalisa i-e-visa yaseVietnam
Sihlole sathola ukuthi izakhamuzi zaseNingizimu Afrika AZIFANELE i-e-visa yaseVietnam, ngakho-ke, ungakhetha inketho 2 noma 3 ukuze uthole i-visa yokuvakashela iVietnam.
Sicela izakhamuzi zamanye amazwe zifundisise “Ngubani ofanele i-e-visa yaseVietnam?” ukuze zibone ukuthi ingabe ziyifanele i-visa yaseVietnam noma hhayi.
Inketho 2. Bhalisa i-visa kumanxusa aseVietnam aseNingizimu Afrika
Nansi ikheli lehhovisi likamanxusa aseVietnam, elisePitoli, Ningizimu Afrika, ongathinta khona ukuze ubhalise i-visa:
Ikheli: 87 Brooks Street, Brooklyn, Pretoria, South Africa
O. Box Hatfield 0028
Ucingo: + 27 (0) 12 362 8119
Isikhahlamezi: + 27 (0) 12 362 8115
Inketho 3: Cela i-visa etholwa lapho ufika kuwebhusayithi yama-visa.
Ngokungafani nama-visa atholwa lapho ufika kwamanye amazwe, ukuze uthole ​i-visa etholwa lapho ufika​ yaseVietnam, kumele abanikazi bamaphasipothi aseNingizimu Afrika baphathe ​incwadi egunyaza i-visa ebhalwe nguMnyango WezokuFika waseVietnam ekuvumela ukuthi ​uthathe i-visa yakho nxa ufika​ esikhumulweni sezindiza samazwe onke aseVietnam. Ziningi izinkampani namawebhusayithi ama-visa alungisa incwadi egunyaza i-visa, ungayicela kubo noma kithi ku-intanethi.
Sicela unake ukuba i-visa etholwa lapho ufika ngeyezivakashi ezingena eVietnam ngesikhumulweni sezindiza samazwe ngamazwe. Ukubhalisa i-visa ngenkampani esebenza ngezokyhamba kuyashesha njalo asikho isidingo sokuya kukheli likamanxusa ukuze eyamukele isicelo sakho.
TAGS I-Visa YaseVietnam I-visa yaseVietnam eyabantu baseNingizimu Afrika
Indlela yokuthola i-visa yaseVietnam March 4, 2021